google pixel: march chengetedzo chigamba inobata isina waya kuchaja
Kuru Nhau & Ongororo Google Pixel: Kurume chekuchengetedza chigamba kunokanganisa waya isina waya
Fungu remashoko asina kugadzikana rapfuura richangopfuura Maforamu Ekutsigira eGoogle uye Reddit (kuburikidza Android Central ). Icho mhedzisiro yeiyo yekupedzisira Android chengetedzo yekuvandudza iyo yakasvika varidzi vePixel munaKurume. Uye kunyangwe yaitaura kune yaimbozivikanwa bhatiri chiratidzo bhagi, zvinoita sekunge yakaunza chimwe chinhu chakaipisisa nayo. Vanhu vari kushandisa Pixel mafoni vari kuzivisa kuti mafoni avo haakwanise kubhadhariswa kuburikidza neyechitatu-bato isina waya majaja.
Vamwe vanhu vanoshandisa vechitatu-bato majaja asina waya vari kuwana iwo meseji 'fambisa foni kubhadharisa' uye havagone kuenderera kumberi. Vashandisi vakaedza kudzoreredza zvishandiso zvavo kana kudzoreredza zvachose Android, kudzoreredza chishandiso kumafekitori ayo - asi hapana chimwe cheizvi chinotungamira kune wakanaka mhedzisiro Iyo chete nzira inoita kunge yakashanda kudzikisira iyo kune yapfuura Kukadzi vhezheni yechichengetedzo chigamba. Zvine musoro, izvi zvinogona kureva kuti dambudziko riri padivi re software - uye zvechokwadi rinokonzerwa neMarch chengetedzo chigamba.
Izvo zvinonzwisiswa kubva kumishumo kuti mashandiro emidziyo ine iyo Pixel Mira haina kukanganiswa nechengetedzo yekuvandudza. Izvo zvinongokonzeresa kuti mafoni amire kuchaja neyechitatu-bato isina waya majaja. Uyezve, vamwe vatengi vari kutaura kuti avo vechitatu-bato majaja anoshanda ukuwo nhare dzadzimwa. Chero chii chiri kukonzeresa nyaya idzi, Google inoda kuzvigadzirisa munguva pfupi kwete, kana zvirinani ndizvo izvo varidzi vePixel varidzi vari kutarisira.
iphone se kudzokorora kwenguva refu
iPhone 12 Pro uye Pro Max mavara: ese mavara aripo uye ndeapi marara aunofanira kuwana?
LG G2 Android 5.0 Lollipop inogadziridza ichibuda
Kurumidza chinja iyo foto yemufananidzo pane yako Google Contacts app
Galaxy Note 10 uye Cherechedzo 10+ zvibodzwa $ 200 mitengo pa Best Buy, yemahara isina waya charger inosanganisirwa
iPhone Camera Evolution: mashandisiro akaita kamera kamera kubva iPhone 6 kuenda iPhone 11 Pro Max